ကြိုးရှည်ဦးထုပ် အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: T Thant
Mask နဲ့တွဲထားတဲ့ပုံတွေက Mask ပါပါမယ်ဗျာ
အလန်းတွေပဲမို့ တစ်ပုံချင်းရှိုးပြီးကြိုက်ရာရွေး o_O o_O
colors ဖြူ . မဲ . နီ . ၀ါ . ပြာ
ကြိုးကို ကလစ် . စာတန်းအမျိုးမျိုး . ပြောင် . တို & ရှည်
Code . Hat 262
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံနဲ့/Code No/အရောင်/size လေးတွေနဲ့
ကြာချိန် (2) ပတ်ကျော်ပါခင်ဗျာ